Atụmatụ Agụmagụ Reader maka ndị na - ede blọgụ Ọhụrụ | Martech Zone
Fraịde, Machị 30, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ na-ewe ụfọdụ obi ike iji dee blog. Na-etinye onwe gị na weebụ yana ndekọ ederede nke echiche na echiche gị. Nghọta ahụ megheere gị maka ịkwa emo ozugbo ma ọ bụ, mgbe ị gbasasịrị mbọ ike, nkwanye ùgwù. N’ikwu ya n’ụzọ doro anya, i tinyela aha gị n’ahịrị - ohere ọ bụla ị ga-eji rụọ ọrụ n’ọdịnihu nwere ike ịbụ otu ihie ụzọ mebie ọrụ gị. Egwu!
Setịpụrụ blog gị na Blogger, TypePad or WordPress (akwadoro). Mgbe ahụ ị ga - anọdụ ala chee echiche maka blọọgụ izizi gị… ọtụtụ narị echiche na - agbanye n'isi gị. Olee otu i si ebido? Ana m agwa ndi mmadu ka ha mee ya ma nweta ya. Amalitere m na a rant na Mountain Dew na-akpọsa nri ụtụtụ. Site na ọkwa izizi gị, belụsọ na ị bụ aha a ma ama, ị na-amalite na aha efu na, ma eleghị anya, ndị na-agụ efu.
Ọ bụrụ na m mara naanị mgbe ahụ ihe m maara ugbu a, posts ndị na-esote nwere ike ịbụ ntakịrị ntakịrị. Anaghị m akwa ụta maka ụzọ m jere, mana enwere m ike ịnweta ndị na - agụ akwụkwọ ọhụụ ngwa ngwa. Adịghị m etinye uche na ndị na-agụ akwụkwọ, naanị m na-anwa ịme ka m mara ede ihe kwa ụbọchị ma ọ bụ karịa wee nwee mmetụta maka ya. Zọ kachasị mma m gaara esi gaara abụ ide nzaghachi dị ukwuu na ntanetị ndị ọzọ. Agụọla m ọtụtụ blog tupu mụ amalite ma esonyeghị m na mkparịta ụka ahụ. A sị na m mere nke ahụ, ndị na - ede blọgụ ọzọ na aha gaara agugo blog ma nwekwaa ike ka edemede m.
Ntuziaka #1 Tinyere ụfọdụ ederede ọhụrụ, dee banyere ụfọdụ ederede ndị ọzọ na blogosphere iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee ọganihu. Jide n'aka na-ahu nagide trackbacks.
Mgbe ozi ole na ole gachara, kpọọ (iri ngarị, chọọ, rịọ, iyi egwu) ndị enyi gị ka ha gụọ ma kwuo maka ihe ndị ị na-ekwu. Nkwupụta na-enyefe ntụkwasị obi na blọọgụ n'ihi na ọ na-enye ndị na-agụ ya echiche nke ihe ndị na-agụ akwụkwọ gị na-eche banyere saịtị gị NA na blog gị kwesịrị ịza ajụjụ na ya. Ọ bụrụ na ị maara ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ, gbaa ha ume inyocha blọọgụ gị maka gị ma tụbara gị ụfọdụ 'njikọ ịhụnanya'.
Ntuziaka #2 Wulite ụfọdụ nkwupụta ma gbalịa nweta ụfọdụ trackbacks site na ndị na-ede blọgụ ị maara.
Ọ dị mma, ị gara n'ụlọ mma mara mma wee nwee ntutu ntutu mara mma, ugbu a, ọ bụ oge iji ejiji ma gosi igirigi ọhụrụ! Wunye onwe gi n'ime obodo na ebe edokọbara mmekọrịta. Mgbe m nyeere JD aka ịmalite blọgụ ya, Black na Business, Enwetara m JD iji sonyere MyBlogLog na mgbe ahụ, ezigara m blog ya n'ọtụtụ saịtị ntinye akwụkwọ mmekọrịta, nke bụ isi StumbleUpon. StumbleUpon achọghị ezigbo ọkwa ka ị nwee ọkwa - ị nwere ike itinye nkọwa na ụfọdụ mkpado. Ndị ọrụ StumbleUpon nwere mmasị yiri ya ga-eme ya sụọ ngọngọ na blọgụ gị na ọtụtụ ga-arapara n'ihi ọdịmma ndị mmadụ.
Ntuziaka #3 Na-erite uru nke ụfọdụ netwọk ịde blọgụ na saịtị ibe mmekọrịta.
Ka ị na-aga n'ihu na-ede ihe, jide n'aka na nyochaa ọdịnaya gị. Nke ahụ ga - enye gị nzaghachi nke post ndị ọbịa na - achọta ọtụtụ yana posts nwere ọtụtụ egwu. Tinyere ile anya na ihe ị na-ekwu, ugbu a ị nwere ike ịlele foto nke ụzọ iji bulie ọdịnaya blog gị. Gaa maka ya! Lather (hichaa ọdịnaya gị), sachaa (dobe ahihia) ma megharịa. Gaa n'ihu na-eme ya na 500 posts mgbe e mesịrị ị ga-ekweghị otú ebe ị na enwetatụbeghị.
Ntuziaka #4 Lather, itucha, ikwugharị.
Ntuziaka ikpeazụ: Zere ihe nzuzu n'ebe ahụ. Nke a bụ usoro nke isi mkpịsị aka: saịtị ọ bụla 'Top Blogging' nke chọrọ ka ị wụnye baajị, ọkọlọtọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla eserese, nọrọ na heck pụọ. Enweghị ndozi ngwa ngwa na blog. Ntughari na-ewe oge, iwulite ọgụgụ isi na-ewe oge, na iwulite ‘nchọta’ gị na igwe ọchụchọ na-ewe oge. Zere ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na-ede blọgụ nke ga-eme ka ntanetị blog gị dịkwuo elu site na itinye ihe ngosi na blog gị.
Ntuziaka #5 Zere itinye eserese na saịtị gị nke na-akpọsa ụfọdụ ihe nchịkọta ịde blọgụ na-adịghị enye gị ihe nzuzu.
Ihe mere Flex na Apollo ga-eji merie
Akwa Post, Doug.
Leahapụ ezigbo okwu bụ ezigbo ụzọ iji nweta ọgụgụ akwụkwọ - ị bụ onye izizi ịza ajụjụ na blọọgụ m, abụkwa m onye na-agụ blọgụ gị mgbe niile. 😉
Otu ndụmọdụ ọzọ m nwere ike ịkekọrịta bụ nke ịnye gị blog anya na mmetụta dị iche - emela ka ọ dị mgbagwoju anya, ọ dị ize ndụ iji ọtụtụ nkwụnye mgbakwunye na-agbakwunye atụmatụ dị mma. Imirikiti njirimara ndị ahụ na-enyere gị aka mgbe ị nwetachara ọtụtụ posts.
Dika Doug kwuburu na mbụ, nwee ụfọdụ ihe mkpali na-eme ka ndị na-agụ ya na blọgụ gị; ọtụtụ na-abịa site na nyocha ọchụchọ, wee nwee ike ịgụ naanị otu ntinye. Ọ bụrụ na ị, agbanyeghị, gosi ụfọdụ ederede metụtara ya na ngwụcha post gị, ha nwere ike ịnọtụ obere, na nloghachi, Kwa!
Nke ahụ bụ kediegwu ndụmọdụ! Amaghị m na m bụ onye mbụ na-aza ajụjụ na gị… nke ahụ bụ n'ezie mma! M hụrụ n'anya na-agụ gị blog!
Ndụmọdụ dị egwu maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ Doug.
M abụọ ihe niile ị dere.
Otu ndụmọdụ ọzọ:
Adala mba! Mgbe ụfọdụ ọ ga - adị gị ka ị na - agwa mgbidi friggin okwu. Echegbula, ndị mmadụ na-ege ntị / na-elele ọbụlagodi na ha azaghị. Nọgide na-eme ya!
Naanị $ 0.02 🙂 m
Nke ahụ $ 0.02 ruru nde nde, Tony! Ndị na-ede blọgụ na-echegbu onwe ha mgbe ha enwetaghị ọtụtụ nzaghachi… mana eziokwu bụ na 98% gaa 99% (n'ụzọ nkịtị… Agụla ụfọdụ stats) nke ndị mmadụ na-eleta blog gị agaghị ahapụ ikwu. Ya mere, cheta na ndị folks na-agụ akwụkwọ na ị na-arụ nnukwu ọrụ!
Ọ bụ marathon, ọ bụghị agba ọsọ.
Doug, nkwado gị dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na nduzi gị agara m agba mgba. Isi okwu ya bụ, ọ na - enyere aka na mbido inwe onye nwere ahụmịhe ọzọ ga - enyere gị aka ịghọta na ị gafere onwe gị ma ọ bụ mee onwe gị nzuzu. Banyere saịtị ịkparịta ụka n'networkntanet, kwuo okwu na saịtị ndị ọzọ ma mee onwe gị ka amara gị. Ziga ugboro ugboro ma jee ebe obi gị na-ebu gị. Enwere m blog azụmahịa mana m kwukwara maka egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Onye ndu m na ihe nlere anya m bu Doug Karr, onu ogugu 3000 ihe n’uwa. Ọ bụ ihe ọ funụ na ikiri blọọgụ ya na-enweta ndị na-agụ ya n'ọnụ ọgụgụ dị egwu.
Daalụ, JD! Echere m na onye nchịkwa nchịkwa na-adịkarị mfe mgbe ọ nwere nnukwu ọmarịcha iji rụọ ọrụ!